सडकमा यो त अति भो ! किन यस्तो हर्कत रोकिदैन ? | Prabhavkari News
सडकमा यो त अति भो ! किन यस्तो हर्कत रोकिदैन ?
विष्णुप्रसाद पोखरेल/ दमक
दमक फराकिलो सडक तथा भित्रि सडकहरु समेत पीच भएको नगर हो । यहाँको भौतिक विकास अन्य झापाका नगर तथा शहरहरु भन्दा निक्कै राम्रो छ । लोभलाग्दो रहेको छ । अझ बजारभित्रका सडकहरु अहिले निक्कै आकर्षक भएकाछन् । जसले गर्दा शहरको सुन्दरता बढाएको छ । नगरको शान बृद्धि भएको छ ।
तर सडक बनाएर मात्र हुन्न यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन र रेखदेख गर्नु पनि महत्वपुर्ण हो । समयमा सडकहरुको मर्मतसम्भार गर्नु पनि दायित्व हो । यदि यो नभएमा सडकहरु केहि समयपछि नै कुरुप बन्नेछ र पछि कच्ची सडकभन्दा बेहाल हुने अवस्था आउन सक्छ । केहि समय अघि दमकका सडकहरुको बेहाल भएको पनि देखिएको थियो ।
माथिको तस्विर मुख्य आवतजावत हुने दमकको एक सडकको हो । रातो पुलबाट १ सय मिटर फाल्गुनन्द चोक जानेबाटो गएपछि दक्षिणबाट इलाका प्रशासन कार्यालय अगाडि जाने बाटोको हाल बेहाल छ । कालोपत्रे सडक बन्द गरेर निर्माण सामाग्रि थुपारिएको छ । त्यहि माथि सिमेन्ट मुसिएको छ ।
कालोपत्रे सडकभरी असरल्ल ढुंगा, गिटी, बालुवा, रड लगायतका भौतिक सामाग्रिहरु राखिएको छ । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो दमकका धेरै सडकहरुको हविगत यस्तै छ । आखिर यहाँ सरोकारवाला निकायको ध्यान किन गएको छैन । यस सडक भएर जनप्रतिनिधि वा प्रशासनिक ब्याक्तिहरु नहिडेर पो हो कि ?
बारम्बार रुपमा सडकमा निर्माण सामाग्रि नराख्न नगरपालिकाले अपिल गर्छ । कार्वाही गर्ने पनि बताउछ । अटेर गरेमा त्यसलाई उठाएर लैजाने र त्यसमा लागेको खर्च स्वंय (जस्ले निर्माण सामाग्रि राखेको हो उसलाई) तिराउने भनेर सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्छ तर खोइ यसको कार्यान्वयन ? पीच सडक त बिग्रदैछ त । लगानी त खेर जाँदैछ त । शहरको सुन्दरता त बिगार्छ त । अनि दुर्घटना पनि बढ्दैन र ?
सडकमा देखिएको बेथिती र हेपाह प्रवृतीलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दमकका सडकहरुमा बर्षादको समयमा धान रोप्न लायक बन्न सक्छन् । यहाँ गरिएको लगानी खरानी बन्न सक्छ । सार्वजनिक सम्पती संरक्षणको दायित्व नागरिकको पनि हो । सडक उपभोक्ताले सडक बिगार्नेमाथि प्रश्न खडा गर्नु जरुरी छ ।
यो कार्य अविलम्ब रोकिनु पर्दछ । सार्वजनिक कालोपत्रे सडकमाथि सिमेन्ट मुछ्ने काम गर्न दिइनु हुदैन । शहरबजारमा समस्याहोला तर समस्या सामधानका लागि के गर्न सकिन्छ र मापदण्ड के पालना गराउन सकिन्छ सोचिनु पर्दछ । जनताको रगत र पसिनाबाट कमाएर तथा आर्जित गरेर तिरेको रकमबाट बनेको सडक बिगार्ने कार्य रोकियोस् । यसमा सबैको ध्यान जाओस ।